musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Vashanyi kuHawaii: Tinoda kuona vashoma venyu
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hawaii Kupwanya Nhau • HITA • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Yakagadziriswa nevagari veOahu, uye mukubatana neGuta uye County reHonolulu uye neOahu Visitors Bureau (OVB), iyo Oahu Destination Management Action Plan (DMAP) inoratidza nzvimbo dzekushaiwa pamwe nemhinduro dzekuvandudza hunhu hwevagari. hupenyu uye kugadzirisa chiitiko chemushanyi. Chinhu chekutanga pane icho chirongwa ndechekudzora huwandu hwevashanyi. Tourism ndiyo mutyairi mukuru wehupfumi muHawaii uye anozviparadzira pamusoro pemamwe maindasitiri senge sevhisi, chekufambisa, uye zvekutengesa.
Mhinduro yemunharaunda yakaunganidzwa panguva mbiri dzekuratidzira pamwe nefomu yekuisa yepamhepo.
Iyo Hawaii Tourism Authority (HTA) yakaburitsa iyo 2021-2024 DMAP, gwara rekuvakazve, kutsanangura patsva uye kumisazve iko kwekushanya kuOahu.
Urongwa hwenharaunda-chikamu chikamu chebasa reHTA rakanangana neMamalama Kuu Imba (kuchengeta imba yangu inodikanwa) uye nekukurumidza kwayo kuedza kuri kuita kutashanya nenzira yekuvandudza.
"Tinotenda vagari veOahu vakapinda muchiitiko cheDMAP uye nekushingairira kupa maonero avo akasiyana siyana, vakakurukura matambudziko akasiyana siyana ane chekuita nekushanya munzvimbo dzavaigara uye vakabatsira kuronga chirongwa chinodiwa mukugara kwenharaunda," akadaro John De Fries , Mutungamiri weHTA uye CEO. "Zviri zvekuenderera mberi nekubatana uye kufambira mberi pamwechete kuenda kumamalama ino inzvimbo inokosheswa uye mumwe nemumwe, sekushuvira kwevanhu veOahu."
Iyo DMAP inotarisa pane zviito zvakakosha izvo nharaunda, indasitiri yevaenzi uye mamwe matunhu anoona achidikanwa pamusoro pemakore matatu emakore. Iyo nheyo yeOahu DMAP yakavakirwa pa HTA's 2020-2025 Strategic Chirongwa, uye zviito zvinovakirwa pambiru ina dzinopindirana - Natural Natural, tsika dzeHawaii, Nharaunda uye Kushambadzira kweBrand.
"Oahu inzvimbo yakakosha uye inomira kubva kune chero imwe nzvimbo pasi rese nekuda kwerunako rwayo uye nevanhu vayo vanoshamisa. Nekushanda pamwe chete senharaunda kuchengeta zviwanikwa zvedu, tinogadzira nharaunda umo tsika nemagariro, ivhu nemvura, hupfumi hwedu, nehukama hwedu hunogona kusimukira, ”vakadaro Meya Rick Blangiardi.
Akaenderera mberi achiti, "Mukushanda pamwe neHawaii Tourism Authority paOahu's Destination Management Action Plan, Guta neRuwa rweHonolulu vachatarisa pazvinhu zvitatu zvinotarisirwa munharaunda: Chengetedza nzvimbo dzedu dzinozivikanwa uye gadzirisa ruzivo kune wese anovashanyira, gumira pfupi -kubhadhara dzimba kunzvimbo dzakatemerwa nzvimbo, uye kuwedzera kushandiswa kwenzira dzekufambisa dzakanangana nevashanyi. ”
Zviito zvinotevera zvakagadzirwa nekomiti inotungamira yeOahu, inoumbwa nevagari vanomiririra nharaunda dzavanogara, pamwe ne indasitiri yevaenzi, akasiyana mabhizinesi zvikamu, uye masangano asingabatsiri, neruzhinji rwevanhu. Vamiriri kubva kuGuta neRuwa rweHonolulu, HTA uye OVB vakapawo zvavakaita panguva yese iyi.
Deredza huwandu hwese hwevashanyi kuOahu kusvika padanho rinodzora nekudzora huwandu hwenzvimbo dzekugara dzevashanyi uye kuongorora shanduko pakushandiswa kwepasi, kugadzwa uye nemitemo yendege.
Ita chirongwa chekutanga-uye chekuuya-kwekushanya chirongwa chekukurudzira kukurudzira hunhu uye hunotsigira hunhu.
Ziva masayiti uye uite zvirongwa zvehutariri zvezvakakosha hotspots paOahu.
Wedzera kumisikidza uye kushandira manejimendi kwenzvimbo uye nzira.
Gadzira sisitimu yekuchengetedza yekutarisa nekutarisira vashandisi pane zviwanikwa zviwanikwa uye zvetsika nzvimbo.
Gadzira "Regenerative Tourism Fee" inonyatsotsigira zvirongwa zvekumutsiridza zviwanikwa zveHawaii, kuchengetedza zviwanikwa, uye kugadzirisa zvikwereti zvekuchengetedza zvisina kubhadharwa.
Kugadzira nekuisa zvirongwa zvekushambadzira kukwezva vafambi-vanokoshesa vafambi vanoisa pekutanga nharaunda, tsika uye kuisa mari munharaunda medu.
Ramba uchigadzira nekushandisa zvirongwa zve "Tenga Mahara" kukurudzira kutengwa kwezvigadzirwa zvemuno nemasevhisi ekuchengetedza mari munharaunda medu uye kudzikisira kabhoni tsoka.
Chengetedza vashanyi 'kushandisa mota sekufambisa paOahu.
Shanda pamwe nevadyidzani vemunharaunda kusimudzira, kushambadza, kukurudzira, uye kutsigira zvimwe zvinowirirana, zvakapetwa zviitiko izvo zvinowedzera vagari nevashanyi zvakafanana.
Gunyana 21, 2021 pa 01: 36